Pro Jawaari oo khudbad ka jeediyay shirka guddoomiyaasha Baarlamaannada Qaarada Africa - Qotoqoto
Pro Jawaari oo khudbad ka jeediyay shirka guddoomiyaasha Baarlamaannada Qaarada Africa
Guddoomiyaasha Barlamaannada dalalka Qaaradda Africa, ayaa kulankoodii sanadlaha ahaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay uu uga furmay xarunta Baarlamaanka Africa ee magaalladda Johansbeg.
Soomaaliya oo qeyb ka ah dalalka Africa, ayaa waxaa shirkaasi uga qeyb-galaya Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari”.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliyeed Md. Maxamed Sheikh Cusmaan “Jawaari” ayaa waxaa uu sheegay in dhallinyarada looga baahan yahay in garab laga siiyo saddax dhinac.
Shirka ayaa dhawaan la filayaa in lasoo afmeero.
Previous PostPrevious Kenya awaits final results in disputed election
Next PostNext Shirkii lagu diyaarinayay Istiraatiijiyadda Waxbarashada Madaniga ee dib-u-eegista Dastuurka oo soo xirmay